စင်ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း | မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရပါတယ်။
စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ ပို့ဆောင်ခြင်း။
စင်္ကာပူသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပွင့်လင်းဆုံးသော စီးပွားရေးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုကို ဦးတည်သည့် အလွန်ဖွံ့ဖြိုးပြီး အောင်မြင်သော လွတ်လပ်သော ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ရှိသည်။
အိန္ဒိယသည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အလျင်မြန်ဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးသည် အမြဲတမ်း ခိုင်မာပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီး ရှိနေသည်။
ဤဆက်ဆံရေးသည် ၎င်းတို့တွင်ရှိသော စီးပွားရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများဖြင့် ပြန့်ပွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှု၊ စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ တိုးမြှင့်ရန် ဘက်စုံစီးပွားရေးဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက် (CECA) ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
စင်္ကာပူတွင် သဘာဝအရင်းအမြစ်များ နည်းပါးနေသော်လည်း၊ စင်္ကာပူသည် သွင်းကုန်ကုန်ကြမ်းများကို မြှင့်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး အိန္ဒိယကဲ့သို့ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများသို့ ကုန်ချောပစ္စည်းများ တင်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုပေးရန်အတွက် ယုံကြည်စိတ်ချရသော ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူအား ရှာဖွေနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ကူညီနိုင်မယ်ဆိုတာ သေချာပါတယ်။ ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
စင်္ကာပူကနေ အိန္ဒိယကို တင်ပို့ဖို့ ဘယ်လောက်ကြာမလဲ။
လောက်ကြာတယ်။ ၈ ရက် ချန်နိုင်းနှင့် ပတ်သက် ၁၁ ရက် ပင်လယ်ရေကြောင်းအားဖြင့် မွန်ဘိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ရန်။
စင်ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ အဓိက တင်ပို့သည်။
စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ အဓိက တင်ပို့မှုမှာ-
Inorganic chemicals နှင့် အထွေထွေဓာတုပစ္စည်းများ၊
စင်္ကာပူမှ တင်ပို့ရန် တားမြစ်ထားသော ပစ္စည်းများ
စင်ကာပူနိုင်ငံမှ တင်ပို့ရန် တားမြစ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများမှာ အောက်ပါတို့ ပါဝင်သည်။
တိရစ္ဆာန်များ အသားထွက်ကုန်များ ကြံ့ချို
ကိုကိုးကားပါ။ စင်ကာပူ အကောက်ခွန် တားမြစ်ထားသောပစ္စည်းများစာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် ဝဘ်ဆိုဒ်။
အိန္ဒိယသို့ တင်သွင်းရန် တားမြစ်ထားသော ပစ္စည်းများ
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အကောက်ခွန်အက်ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသောပစ္စည်းများကို ပုဒ်မ ၂၃ ပုဒ်မခွဲ ပုဒ်မ ၂ တွင် ဖော်ပြထားသည်။ တားမြစ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းများသည် ကျန်းမာရေး၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်၊ လူမှုရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအပေါ် ဆိုးရွားစွာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ အများအားဖြင့် တားမြစ်ထားသော ကုန်ပစ္စည်းအချို့
ရှေးဟောင်းပစ္စည်းများ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသော ပစ္စည်းများ အတုနှင့် ခိုးကူး ကုန်ပစ္စည်းများ
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ထွက်ပစ္စည်းများနှင့် လူ့အရိုးစုများ Aero မော်ဒယ်များ အိန္ဒိယပြင်ပနယ်နိမိတ်များကို မှားယွင်းစွာပြသထားသည့်မြေပုံနှင့် စာပေများ
ညစ်ညမ်းနှင့် ညစ်ညမ်းသောပစ္စည်းများ ဓာတုလက်နက်များ
စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ ပို့ဆောင်ရန် လုပ်ငန်းစဉ်
သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
သင်၏ကုန်တင်ကို မတင်ပို့မီ၊ ၎င်းတို့သည် စင်ကာပူရှိ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များ ခံထားမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးရပါမည်။
အကောက်ခွန်ပါမစ်အတွက် လျှောက်လွှာအားလုံးကို Singapore Customs' TradeNet စနစ်မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းရမည်ဖြစ်သည်။
အတည်ပြုခဲ့သည်။ TradeNet ဖြေရှင်းချက်ပေးသူ, သို့မဟုတ်
အဆိုပါ အစိုးရ Front-End လျှောက်လွှာ.
ကုန်စည်ရှင်းလင်းရေးအတွက် စာရွက်စာတမ်းများ ပြင်ဆင်ပါ။
တင်ပို့ခြင်းမပြုမီ အချို့သောစာရွက်စာတမ်းများကို တင်ပြရမည်။ ဒါက သယ်ယူတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပါတယ်။
ကိုကိုးကားပါ။ စင်ကာပူ အကောက်ခွန် လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် ၀ က်ဘ်ဆိုက်။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ
တစ် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူ အဖြစ်ယူဆသည်။ တတိယအဖွဲ့အစည်း ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ပေးသူ.
တင်ပို့သူနှင့် တင်သွင်းသူအကြား ကွာဟချက်ဖြစ်သည့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပါ၀င်သော တံတားခင်းပေးခြင်း၊ အကောက်ခွန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားများ၊ အာမခံနှင့်ကုန်စည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး။
ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများမှာ-
ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူများသည် စာရွက်စာတမ်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ပြီးမြောက်စေပါသည်။ ၎င်းသည် အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုကြောင့် ကြန့်ကြာမှုမရှိစေဘဲ တင်ပို့မှုများကို အချိန်မီလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန် ကူညီပေးပြီး သေချာစေပါသည်။
၎င်းတို့သည် အထိရောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းနှင့် ကုန်တင်သယ်ယူရာတွင် အသက်သာဆုံးနည်းလမ်းကို ဖော်ထုတ်နိုင်ကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခနှုန်းထားများသည် စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အပြိုင်အဆိုင်အရှိဆုံးများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် အာမခံနှင့် ကွန်တိန်နာခြေရာခံကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ကုန်စည်အတွက် လုံခြုံရေးကို ပေးဆောင်သည်။ - ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူသည် ကုန်စည်ပို့ဆောင်သည့်နေရာနှင့် သဘောတူထားသည့်လမ်းကြောင်းတွင် နေရာလွဲမှားခြင်း သို့မဟုတ် လွှဲမှားခြင်းဖြစ်လျှင် သိနိုင်သည်။ ၎င်းက ကုန်ပစ္စည်းများကို ခြေရာခံပြီး အချိန်နောက်ကျခြင်းကဲ့သို့သော မလိုလားအပ်သော အဆင်မပြေမှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
စီမံခန့်ခွဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုသည့်အချိန်ကို လျှော့ချပါ။ တင်သွင်းသူသည် တင်ပို့မှုကို စောင့်နေစဉ်တွင် စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်းကဲ့သို့သော အခြားအလုပ်များကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီစေရန် သင့်လျော်သော ပို့ဆောင်မည့်ရက်စွဲများကို ပေးဆောင်ပါသည်။ ယင်းသည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များ သင့်လျော်စွာ စီစဉ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ပို့ဆောင်မည့်အချိန်ကို ဖောက်သည်က သေချာသည်။
၎င်းသည် ကုန်ပစ္စည်းများကို ၎င်းတို့၏ လိုအပ်သောနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပြီး မှန်ကန်သောအခြေအနေတွင်ရှိကြောင်း သေချာစေသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်သူနှင့် ဖောက်သည်များကြား ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့် ယင်းဝန်ဆောင်မှုများသည် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သိုလှောင်မှုသည် ကုန်ပစ္စည်းများ မတင်ပို့မီနှင့် ပို့ဆောင်ပြီးနောက် ပျက်စီးခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
အဘယ်ကြောင့် M&P International ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုတွင် သင်ပါဝင်သင့်သနည်း။
သင့်လုပ်ငန်းကို အနှောင့်အယှက်တစ်စုံတစ်ရာမှ ရှောင်ရှားနိုင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ထားသည့်အချိန်၌ ပို့ဆောင်ပေးကြောင်း သေချာပါသည်။
FIATA၊ SLA နှင့် MTO အသိအမှတ်ပြု ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှ ကျယ်ပြန့်သောအေဂျင်စီများ၏ ကွန်ရက်တစ်ခုဖြင့် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
၎င်းသည် သင့်ပစ္စည်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုံခြုံစွာရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေမည့် ဘေးကင်းပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်စေပါသည်။
စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ ပစ္စည်းပို့ခ ဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ။
သင့်ပစ္စည်းများကို ပို့ဆောင်သည့်စျေးနှုန်းသည် ကုန်စည်၏အရွယ်အစားနှင့် အလေးချိန်အပြင် အသုံးပြုသည့် ပို့ဆောင်မှုနည်းလမ်းအလိုက် ကွဲပြားမည်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းများကို စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ မည်သို့ပို့ဆောင်နိုင်မည်နည်း။
သင့်ပစ္စည်းများကို ပေးပို့ရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ လေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး (လေယာဉ်ဖြင့် ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်း) သို့မဟုတ် ပင်လယ်ရေကြောင်းကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး (ပင်လယ်ရေယာဉ်ဖြင့် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခြင်း)။
ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းများကို စင်္ကာပူမှ အိန္ဒိယသို့ စျေးအသက်သာဆုံး ပို့ဆောင်ရန်မှာ အဘယ်နည်း။
၎င်းသည် သင်ပို့ဆောင်လိုသော ပစ္စည်းများ၏ ပမာဏပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
ကုန်စည်ပမာဏ အနည်းငယ်သာ ပို့ဆောင်ပါက လေကြောင်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခ ပိုတတ်နိုင်သည် ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် ကုန်စည်အများအပြားကို ပို့ဆောင်ပါက စရိတ်စကသက်သာသော ပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အမျိုးမျိုးသော ပို့ဆောင်မှုရွေးချယ်စရာများအကြောင်း နောက်ထပ်အချက်အလက်များအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းများ ရှိပါသလား။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏အတိုင်ပင်ခံများနှင့်စကားပြောပါ။ သင့်တွင်ရှိနိုင်သည့် မည်သည့်မေးခွန်းများကိုမဆို ဖြေကြားရန် ဝမ်းမြောက်မိပါသည်။